Bell angidimby 47 FS2004 HOT
Angidimby avy amin'ny 11 repaints. Attention, sarotra ny manova ny toe-!
Ao 1943, Arthur Young niaraka Bell mba hampitombo sy mamokatra ny angidimby avy amin'ny fikarohana manokana, ny modely 30. Io modely fa mbola azo iainana rustic, natao tao anatin'ny roa kopia sy Bell nahatonga ny fahaiza-manao ilaina. Ny modely Bell 47 nanao ny sidina voalohany Desambra 8, 1945, izy no voalohany faobe-novokarina angidimby ho an'ny miaramila sy ny sivily mpampiasa, ary koa ny voalohany mba handray ny taratasy fanamarinana ny airworthiness ao amin'ny United States sivily.
Ny United States Hery Tafika Air nametraka baiko ao 1947, be dia be ny yr-13, H-13 ho tonga. Misy ihany koa ny fitaovana nampiasain'ny tafika an-dranomasina ny US ambanin'ny fanendrena HTL-1. Ny US Army Tsy hijanona araka ny ampiasaina ao amin'ny maro ny hevitra ao mifandray amin'ny asa fitoriana, fandinihana sy ny fampiofanana. Ny Bell 47 koa nampiasaina tamin'ny ady nandritra ny Adin'i Korea eo 1950 sy 1953 ho toy ny mpitsabo famoahana vondrona.
Ny hazavana Tafika fiaramanidina frantsay no ampiasaina am-polony maro ireo angidimby, indrindra fa mandritra ny Alzeriana ady izay nisy fitaovana tamin'ny balafomanga SS11. Ny hafa no napetraky ny tafika an-dranomasina.
Ny fiaramanidina naorina tamin'ny dikan-maro sy ny zana-dikan izay nahomby indrindra dikan-Bell 47 G. Ny fitaovana dia navoakan'ny Bell mandra-1974, ary mbola ho vokarina eo ambanin'ny fahazoan-dalana amin'ny firenena maro hafa. Ny voalohany Agusta-Bell 47 vokarina any Italia nanidina voalohany tany 1954, izy koa novokarin'ny Kawasaki any Japana sy tany Grande-Bretagne avy Westland izay nanorina 231 Sioux dika mitovy anarana sy ampiasain'ny Air ny Tafika Corps.
Ny fitaovana dia namokatra gazety efa ho 6000 eran-tany. Izany no mbola ampiasain'ny firenena maro, fa ny isan'ny fitaovana nampiasaina mbola mandà. Ao 1998, ny tarika foana équipait tafika, Kolombia, Gresy, Indonezia, Italia, Lesotho, Libya, Malezia, Malta, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Peru, Taiwan, Tanzania, Torkia, Orogoay ary Zambia.
Bell angidimby 430 FS2004
16663 4.00 (4)
By by Alan Devins and Rory Kelly, Finished off by Keith Devins
15818 3.67 (9)
By Visible dans FS9 Aircraft Bell
15753 4.13 (8)
By Original Model: Deane Baunton, Textures & Model Mo
Bell angidimby 47 FS2004
By Jean-Marie MERMAZ